Wararka - Bandhigga Baina ee 2020 Shiinaha
Bauma Shiinaha, Mashiinka Dhismaha Caalamiga ah ee Shanghai, Mashiinnada Qalabka Dhismaha, Mashiinnada Macdanta, Gawaarida Dhismaha iyo Qalabka Expo, waxaa lagu qabtaa labadii sanaba mar Shanghai New International Expo Center. Bauma Shiinaha waa madal bandhig xirfadeed ee Aasiya loogu talagalay warshadaha mashiinada dhismaha
Bauma China 2020 waxaa lagu qabtay Shanghai New International Expo Center laga bilaabo Noofambar 24-27, 2020. Sida kordhinta carwada adduunka caan ka ah ee mashiinada dhismaha BAUMA ee Shiinaha, BAUMA Shiinaha (Shanghai BMW Dhismaha Mashiinka Dhismaha) waxay noqotay marxalad tartan ah ee loogu talagalay shirkadaha makiinadaha dhismaha adduunka. Halkan, tiro aad u tiro badan oo shirkado tayo sare leh ayaa isugu soo baxay si ay u soo bandhigaan tobanaan kun oo ah alaabooyin iyo tikniyoolajiyad hal-abuur leh, waxayna markhaati ka yihiin dhaxalka xigmadda mashiinnada dhismaha.
Bauma China 2020 waxay isu keenaysaa carwadayaasha gudaha iyo dibada, daboolida guud ee mashiinada dhismaha, soo saarida qalabka ceeriin iyo soosaarida qalabka, qalabka dhismaha qalabka, qalabka iyo bixiyeyaasha adeega, si loo muujiyo horumarka cusub ee warshadaha.
Iyada oo hal ku dhigeedu yahay "Aragtida Waxsoosaarka Sirdoonka, Horudhac ahaan iyo Jiif ahaan", Bauma China waxay si dhow ula fasiraysaa barta cusub ee laga bilaabayo warshadaha mashiinada dhismaha ee Shiinaha aragtiyada kala duwan sida wax soo saarka caqliga badan, wax soo saarka caqliga badan, adeegga caqliga iyo maareynta caqliga badan.
In kasta oo caqabadaha jira ay sabab u yihiin Covid-19, AWOODDAADA LIKE POWER waxay raadineysay qaabab ay markale ku soo bandhigto sannadkan. Waxaan jeclaan lahayn inaan baarno oo aan helno wada-hawlgalayaal cusub oo iskaashi sannadka 2020 Bauma.
Waxaan soo bandhignay soogalootigayaga cusub oo ay kujiraan koronto yar oo koronto dhaliyaha ah, kombaresarada hawo qaadka ah, iyo 5-30kw munaarad la qaadan karo iyo wixii la mid ah. , Qaab dhismeedka is haysta, kharashka gaadiidka oo hooseeya, heerkulka oo hooseeya iyo buuq yar, tayo la isku halleyn karo, waxqabad xasiloon oo waara, ku habboon oo dhakhso badan iibka ka dib.
Sida halkudhigga bandhigga, waxaan u adeegsan doonnaa caqligeenna si aan u abuurno aragti wanaagsan, soo saarno wax soo saar la isku halleyn karo oo tayo sare leh, isla markaana aan ugu adeegno macaamiisheenna iyo bulshadeenna.
Waqtiga boostada: Feb-25-2021
Shixnad siman oo saameyn ku leh ...
Waxaa saameeyay shirkadda cusub ee 'Covid-19' sanadka 2020, warshadaha kala duwan waxaa la soo kulmay saameyn badan, waxayna noqon doontaa mowjad weyn oo qabow ku ah dhaqaalaha adduunka, ganacsiga iyo isticmaalka qadka. Shanta warshadood ee waaweyn sida cunnada, gaadiidka, dalxiiska iyo guryaha, iyo sidoo kale tafaariiqda qadka ka baxsan, ayaa wajihi doona ...